Suuqa Wadada - Maareynta Mawduucyada La Fududeeyey | Martech Zone
Sabtida, Oktoobar 24, 2009 Khamiista, Diseembar 5, 2013 Douglas Karr
Dhowr bilood ka hor waxaan ku booqday kooxda at Suuqa oo waxay heleen bandhig ay ku muujinayaan Software-keeda Adeeg (SaaS) Nidaamka Maareynta Mawduuca (CMS) - oo ay ku jiraan labadaba ecommerce iyo xalka aaladaha aasaasiga ah. Wax badan baan ka maqlay shirkadda laakiin wax weyn bay ahayd in ugu dambayn la helo demo oo aan arko waxa ay ku guuleysteen.
Matt Zentz waa mid ka mid ah aasaasayaashii 'Marketpath' wuxuuna ka soo shaqeeyay ExactTarget maalmihii ugu horeeyay. Ma qarinayo xaqiiqda ah in isdhaafsigooda fudud ay saameyn ku yeesheen waqtigiisii Xaqiiqda. Waa tallaabo wanaagsan. Nidaamyada maaraynta maaddooyinka badankood waxay runtii u baahan yihiin qalooca barashada sare si ay ugu soo wareegaan. Suuqa Waddada ayaa ka dhigtay mid iyagu aad u fudud oo si sahlan loo isticmaali karo. Haddii aad taqaanid sida loo furo barnaamij ku jira Windows ama Mac, waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho MarketPath.
Screenshot ee Maamulka Suuqa CMS
Screenshot ka Tifaftiraha Suuqa Cath
Screenshot ee Suuqa Wadada CMS Security
Screenshot ee Suuqa Wadada CMS Google Analytics
Sida aad ku arki karto shaashadaha shaashadda, waa codsi aad u fudud oo fudud oo la adeegsan karo - laakiin waxaad ku dhisi kartaa websaydhyo aad u adag iyo dukaamo internetka ah oo aad la socoto. Harry Potter Wall Art waa macaamil dhow ee Marketpath's kaas oo bixiya fiirinta sida degdegga ah ee mawduucaagu u heli karo iyo sidoo kale sida aan xaddidnayn goobta iyo xalalka e-commerce.
Intii aad joogtay Suuqa, DK New Media waxay bixiyeen xoogaa jawaab celin ah oo ku saabsan qaabeynta goobta ee raadinta. Waxaan jeclahay inaan caawiyo shirkadahayada gobolada waxaana jira waxyaabo badan oo balanqaad ah oo ku saabsan xalka Marketpath!
Suuqa waddadu waxay leedahay koox weyn iyo xalka weyn. Haddii aad go'aansato inaad iyaga siiso wicitaan, hubi inaad u sheegto inaad ka akhrisay xallintooda Martech Zone!
Tags: sentimitirMaareynta Maareyntanidaamka maamulka contenthannaanka ganacsigasuuqasaassaas cms
bing + twitter = raadinta waqtiga dhabta ah